Apple wuxuu bilaabayaa websaydhka Apple Music xilligan la joogo wajiga beta | Wararka IPhone
Apple wuxuu bilaabayaa websaydhka Apple Music ee hadda wajiga beta
Apple ayaa hadda bilawday websaydhka Apple Music, oo hadda ku jira wajiga beta. Tani waa war weyn, sida Macaamiisha Apple Music waxay bilaabi karaan inay ku raaxaystaan ​​waxyaabaha ay ka helayaan biraawsar internet kasta.
Apple waligeed ma taageerin kor u qaadista adeegga muusikada ee shabakadda, taas oo kugu qasbeysa inaad dhageysato muusikada iyada oo loo marayo arjiga lagu rakibay qalabkaaga, laakiin ugu dambeyntii tani waa isbeddeleysaa. Hadda waxaad ka gali kartaa shabakadda, biraawsar kasta iyo qalab kasta, (Kumbuyuutarro, kiniinno, taleefannada gacanta, iwm) in kasta oo ay weli ku jiraan beta, oo ay ku jiraan waxyaabo aad u yar, laakiin waxay na siineysaa fikrad si caddaalad ah u sax ah oo ku saabsan waxa ay noqon doonto mustaqbalka dhow.
Gudaha Apple Music Web, waxaad marin u heli kartaa dhammaan howlaha muhiimka ah ee adeegga qulqulka, oo ay ku jiraan maktabaddiisa, raadinta, raadiyaha, raadinta, iwm.. Haddii aad u shaqeysid maktabadda ka shaqeysid goobaha, waxaad awoodi doontaa inaad maareyso liiskaaga sida aad ugu shaqeyn jirtay qalabkaaga.
Si aad uhesho nooca buuxa oo leh dhammaan shaqooyinkeeda, waa inaad kaqeyb qaadataa Apple Music oo aad bixisaa rukunka billaha ah. Haddii aad rabto inaad tijaabiso adeegga, waad iska diiwaangelin kartaa bisha ugu horreysa ee tijaabaduna waa lacag la'aan.
Runtu waxay tahay in Apple Music lagu balaadhiyo shabakada waxay kadhigeysaa mid aad ufudud u leh dhamaan isticmaaleyaasha ku raaxeysanaya aaladooda iyo kuwa isticmaala kumbiyuutarrada Windows ama Linux. Mar dambe kuma tiirsanaan doonaan iTunes-kii duugoobay.
Waa run in markii hore laga marin karayay webka iyada oo loo marayo Beats Music, laakiin wuxuu sheegay in websaydhka la waayay markii uu u gudbay gacanta Apple.
Nooca cusub ee Apple Music Web ayaa hadda ku jira beta beta. Waqtigan xaadirka ah waxaa la heli karaa oo keliya haddii aad horey ugu laheyd koonto adeegga Apple Music. Goor dhow, markii wajiga beta uu dhammaado oo ay run tahay, isticmaaleyaasha cusubi waxay awoodi doonaan inay iska diiwaangeliyaan.
Haddii aad horeyba uga mid ahayd adeegga, waad isku dayi kartaa beta.music.apple.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Music » Apple wuxuu bilaabayaa websaydhka Apple Music ee hadda wajiga beta
Eve waxay soo bandhigtay Sensor-biyo cusub oo iswaafajin kara iyo Beddelaad
Barnaamijka Dhacdooyinka Apple ee Apple TV ayaa hadda diyaar u ah muhiimada